अन्तर्वार्ता | Seto Patrika
Saturday, October 24"सञ्चार समाज को ऐना हो ।"
“अस्पतालमा व्यापार रोकिन्छ”, डा. सन्तोष पौडेल
काठमाडौंस्थित मुलुककै एकमात्र राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको औषधि पसलमा प्रत्यारोपणका सामग्री नराख्दा बिरामीले सहुलियत नपाएको विषयमा निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. सन्तोष पौडेल भन्छन्, “विपन्नले १८ फागुनदेखि रु. १ लाखसम्मको औषधि र प्रत्यारोपण सामग्री निःशुल्क पाउँछन्।” ट्रमा सेन्टरमा विपन्न नागरिकले किन सहुलियत पाउँदैनन् ? टाउको र मेरुदण्डमा चोट लागेर ट्रमा सेन्टरमा भर्ना भएकाहरूले अघिल्लो वर्ष ३३ प्रतिशत मात्र निःशुल्क सेवा उपयोग गर्न पाए । प्रत्यारोपणका सामग्री अस्पतालको औषधि पसलमा नभएका कारण बिरामीले बाध्य भएर बाहिरबाट किन्नु पर्दा विपन्नलाई दिइएको औषधि उपचार खर्च उपयोग पूर्ण रूपमा भएन । त्यसैले म नियुक्त भएकै दिन ८ फागुनमा अस्पतालको औषधि पसलबाट प्रत्यारोपण सामग्री उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छु । विपन्न नागरिकले यस्तो सुविधा कहिलेदेखि निःशुल्क पाउँछन् ? अस्पतालले ८ फागुन...
महामारीका जोखिम नियन्त्रणतिर आउन थाल्यो भन्नेबित्तिकै परीक्षा हुन्छ, विद्यार्थी तयार रहनुस्: शिक्षामन्त्री पोखरेल
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) र विश्वविद्यालयहरुको केही सेमेस्टरको परीक्षा स्थगित भयो। वैशाख पहिलो र तेस्रो साता शुरु हुने कक्षा–११ र १२ को परीक्षा पनि नियमित कार्यतालिकाअनुसार नहुने भएको छ। विद्यालयको नयाँ शैक्षिक सत्र पनि पूर्ववत् शैक्षिक क्यालेन्डर अनुसार नहुने देखिएको छ। रोकिएका परीक्षा र विद्यालयको शैक्षिक सत्र कसरी शुरु होला ? शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग गरेको कुराकानीः कोरोना भाइरस प्रकोपका कारण एसईई र स्नातक तहको परीक्षा स्थगित गरिएका छन्। कक्षा ११ र १२ को परीक्षा पनि आउँदैछ। रोकिएका परीक्षा कहिले हुन्छ ? पहिलो त कोभिड १९ को महाविपत्तिको असर कहिलेसम्म पर्छ भन्ने मूल्यांकन गर्नुपर्छ, जुन अहिल्यै भन्न सकिने अवस्था छैन। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार, एसईई स्थगित भएको छ। कक्षा–१२ को परीक्षा ८ वैशाखदेखि र ...
‘सरकारी साथ पाउने हो भने स्टार्टअपले अर्थतन्त्रमा अभूतपूर्व परिवर्तन ल्याउनेछ’
नेपालमा नयाँ उद्यम (स्टार्टअप) को अवस्था कस्तो छ ? शिक्षित भट्ट, सह–संस्थापक, टुटल चूलामा दाउरा बाल्ने अवस्थाबाट ग्याँस र विद्युत्को युगमा पुगे जस्तै नयाँ उद्यमले परम्परागत व्यवसायलाई परिवर्तन गरिरहेको छ । तर, सरकारी सोच पुरातन हुँदा अपेक्षित फड्को मार्न सकेका छैनौं । अझै पनि औद्योगिक युगकै जस्तो स्टील, सिमेन्ट, गार्मेन्ट लगायतका उत्पादनलाई मात्र उद्यम–व्यवसाय मान्ने चेतना छ । नवीनतम उद्यममा नयाँ सिर्जनात्मक काम पर्छन्, जसको उच्च वृद्धि र विस्तारको सम्भावना हुनुपर्छ । सनम चित्रकार, पार्टनर, बिरुवा एड्भाइजर्स नयाँ उद्यम गर्ने संस्कृति प्रेरणादायी छ । तर नयाँ पुस्ताको सीमा कस्तो छ भने, उनीहरूले प्रविधि सम्बन्धी विषयलाई मात्र नवीनतम काम मानेको देखिन्छ । नयाँ सिर्जनात्मक आइडिया भएकासँग समूहमा काम गर्ने क्षमता कमजोर छ । भविष्यमा नि...
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग अन्तर्वार्ता
प्रधानमन्त्री ओली भन्छन्, “दुई/चारजना मान्छेहरूको उत्ताउलोपनसँग सम्झौता गरेर सिंगो देशमा कोरोना फैलाउन सकिँदैन।” काठमाडौं।सरकारले कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीसँग जुध्न गरेको देश बन्दाबन्दी (लकडाउन) अहिले चौंथो हप्तामा पुगेको छ। त्यति नै समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान र सीमानाका बन्द गरिएका छन्। र, लकडाउनले १५ वैशाखसम्मलाई निरन्तरता पाएको छ। बाह्य आवागमन निषेध र देशभित्रको आवागमनमा कडाइ गरिएपनि परीक्षणको दायरा बढाइएसँगै संक्रमितहरूको संख्या पनि बढ्दै गएको देखिँदैछ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, पहाडदेखि तराईसम्म र दूरदराजदेखि काठमाडौं उपत्यकासम्म संक्रमणको उच्च जोखिममा देखिएका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीसँग जुधिरहँदा नेपाललाई सबभन्दा ठूलो संकट के बाट वा कहाँबाट छ ? त्योसँग जुध्न सरकार के गरिरहेको छ ? महामारी रोकथाम र नियन्त्रणको रणनीति के हो र त्यसका लागि के के गरिँदैछ ? यिनै विषयम...